Organization Name The Border Consortium
Contact person Duncan McArthur
Contact Address Room 307. Myay Nu Condo.99-B Myay Nu Street . Sanchaung. Yangon.
Contact Email rocky@theborderconsortium.org
Contact Phone 01-2305996
Establishment (Year) 1984
Function of Organization Donor Agency (အလှုရှင် အေဂျင်စီ)
Sectors Agriculture (လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး), Capacity building (စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်း), Food security (စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး), WASH (ရေသန့် ရရှိရေး/ရေနှင့်ပတ်သက်သော ကျန်းမာရေး), Women empowerment (အမျိုးသမီး စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း), Livelihood (အသက်မွေးမှု)
States or Regions Kayah (ကယား), Kayin (ကရင်), Mon (မွန်), Tanintharyi (တနင်္သာရီ)
Contact Address Room 307. Myay Nu Condo. 99-B Myay Nu Street. Sanchaung, Yangon.
Contact Email duncan@theborderconsortium.org
Contact Phone 01 2305996
Function of Organization Funding Agency (ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ရေး အေဂျင်စီ)
Sectors Agriculture (လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး), Capacity building (စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်း), Food security (စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး), WASH (ရေသန့် ရရှိရေး/ရေနှင့်ပတ်သက်သော ကျန်းမာရေး), Women empowerment (အမျိုးသမီး စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း)